လိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုစနစ်ပေးသွင်းသူ၊ အကောင်းဆုံး ANPR ကားရပ်နားရန်စနစ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Smart ကားရပ်နားရန်နေရာ
TGW ALPR ကားရပ်နားရန်နေရာလိုင်စင်စီမံခန့်ခွဲမှုလိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုအသိအမှတ်ပြုကင်မရာသည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ip camera
လိုင်စင်ပြားကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်နည်းပညာ (လိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ LPR) သည်ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၊ ပုံရိပ်ပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာနှင့်ယာဉ်မော်ဒယ်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုတည်ဆောက်ရန်၊ မော်တော်ယာဉ်၏အမှတ်အသားဖြစ်သောမော်တော်ယာဉ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၊ အရောင်များစသည်တို့သည်ရုပ်ပုံမှရုပ်ပုံကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးအဆင့်မြင့်ရုပ်ပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာ၊ ပုံစံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အတုထောက်လှမ်းမှုများကိုစုဆောင်းထားသည့်ပုံရိပ်များကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထုတ်ယူခြင်းသို့အလိုအလျောက်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ နံပါတ်များ၊ အက္ခရာများနှင့်တရုတ်အက္ခရာများကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ နှင့်တိုက်ရိုက်အသိအမှတ်ပြုမှုရလဒ်ပေးထား, စနစ်ကအဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။ လိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်ဇာတ်ကောင် 1. မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်စာသားနှင့်ကိန်းဂဏန်းများကိုဖေါ်ထုတ်နိုင် ၂။ လိုင်းတစ်ခုနှင့်နှစ်ခုလိုင်စင်နံပါတ်ပြားကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည် ၃။ လိုင်စင်နံပါတ်အတွက် 0-2 အက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များ ၁ မှ ၄ ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည် ၄။ လိုင်စင်နံပါတ်၏တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည် ၅။ ဒေတာဘေ့စ်သည်ရိုက်ကူးထားသောပုံ၊ လိုင်စင်နံပါတ်၊ လမ်းနံပါတ်နှင့်ယာဉ်၏အချိန်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၆။ လိုင်စင်နံပါတ်နံပါတ်ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်မှတ်တမ်းသည် output ကိုအစီရင်ခံနိုင်သည် ၇။ အင်္ဂလိပ်၊ ကိုရီးယား၊ ရိုးရှင်းသောတရုတ်နှင့်ရိုးရာတရုတ်ဘာသာနှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ 8. ပုံရိပ်အရွယ်အစား: 768 * 576pixels ၉ မျက်နှာရှေ့အရွယ်အစား - ၁၆ * ၁၆-၄၈ * ၆၄ ပစ်ဇယ် 10.camera သေနတ်အဆင့်ထောင့်: drive ကိုလမ်းသွားသို့အများဆုံးထောင့် 25 ဒီဂရီ 11.camera သေနတ်ဖြင့်ဒေါင်လိုက်ထောင့် - အမြင့်ဆုံးထောင့် ၂၅ ဒီဂရီကိုအလျားလိုက်သို့ 12.Minimum တောက်ပမှု: 500lux
IP LPR ကင်မရာလိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုကားရပ်နားခြင်းစနစ်
LPR (လိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုခြင်း) နည်းပညာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ LPR သို့မဟုတ် ANPR (အလိုအလျောက်နံပါတ်ပြားအသိအမှတ်ပြုခြင်း) နည်းပညာသည်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များကိုဖတ်ရန်ရုပ်ပုံများပေါ်တွင် optical ဇာတ်ကောင်အသိအမှတ်ပြုမှုကိုအသုံးပြုသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိပိတ်ထားသောရုပ်မြင်သံကြားစက်၊ လမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကင်မရာများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကင်မရာများကိုသုံးနိုင်သည်။ LPR ကိုကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းရဲတပ်ဖွဲ့များကဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အသုံးပြုသည်၊ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအားမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ချထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးသည်။ ၎င်းကိုလခပေးသည့်လမ်းများပေါ်တွင်အီလက်ထရောနစ်ကောက်ခံမှုအတွက်ကောက်ခံခြင်းနှင့်ယာဉ်အသွားအလာလှုပ်ရှားမှုများကိုစာရင်းပြုစုခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ လိုင်စင်နံပါတ်ပြားသည်အသိအမှတ်ပြုနံပါတ်ပြားမှတ်ပုံတင်ကင်မရာများရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်လိုင်စင်ပြားမှစာသားများကိုသိမ်းဆည်းရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအချို့သောယာဉ်မောင်း၏ဓာတ်ပုံကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ စနစ်များသည်ကင်မရာအားနေ့ရောညပါအချိန်မရွေးဓါတ်ပုံရိုက်ရန်ခွင့်ပြုရန်အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ LPR နည်းပညာသည်အကွာအဝေးတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပန်းကန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ LPR နည်းပညာ၏ကောင်းကျိုးများ - ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ၁ ။ 2. ယာဉ်ပန်းကန်စာသားနှင့်ကိန်းဂဏန်းများအလိုအလျှောက်ဖော်ထုတ်; ၃။ ကားရပ်နားရာနေရာတွင်အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအခက်အခဲများကိုလျှော့ချပါ။ 4. အသွားအလာထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်; 5. Tickless / ကဒ်မရှိယာဉ်ရပ်နားအများကြီးစီမံခန့်ခွဲမှု;
Shenzhen TGW Technology Co. , Ltd သည်ကားအသိဉာဏ်ရှိသောကားရပ်နားရန်နေရာ၊ လိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုအသိအမှတ်ပြုစနစ်နှင့်လမ်းလျှောက်သွားသူအ ၀ င်ထိန်းချုပ်မှုအလှည့်ကျနေရာနှင့်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက်ထိပ်တန်းလက်လှမ်းမီမှုထိန်းချုပ်ရေးဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့် LPR လိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုကင်မရာစမတ်ယာဉ်ရပ်နားမှုစနစ်နှင့် anpr software နှင့်အတူ
လိုင်စင်ပြားကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်နည်းပညာ (လိုင်စင်ပြားအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ LPR) သည်ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၊ ပုံရိပ်ပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာနှင့်ယာဉ်မော်ဒယ်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုတည်ဆောက်ရန်၊ မော်တော်ယာဉ်၏အမှတ်အသားဖြစ်သောမော်တော်ယာဉ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၊ အရောင်များစသည်တို့သည်ရုပ်ပုံမှရုပ်ပုံကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးအဆင့်မြင့်ရုပ်ပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာ၊ ပုံစံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အတုထောက်လှမ်းမှုများကိုစုဆောင်းထားသည့်ပုံရိပ်များကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထုတ်ယူခြင်းသို့အလိုအလျောက်ထုတ်ယူနိုင်သည်။ နံပါတ်များ၊ အက္ခရာများနှင့်တရုတ်အက္ခရာများကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ နှင့်တိုက်ရိုက်အသိအမှတ်ပြုမှုရလဒ်ပေးထား, စနစ်ကအဖြစ်မှန်ဖြစ်လာသည်။
ယာဉ်ရပ်နား Ir Touch ကို Frame ကငွေပေးချေမှုရမည့် Terminal နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုရပ်နားငွေပေးချေမှုရမည့်စက်
အဆိုပါ Self-ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုစက်အဆိုပါယာဉ်ရပ်နားအများကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် Self-ဝန်ဆောင်မှုပေးချေမှုများအတွက် terminal ကိုကိရိယာဖြစ်သည်။ ငွေပေးချေမှုနှင့်ပုံနှိပ်ကြော်ငြာ Integrated အဆိုပါထုတ်ကုန်။ ဒါဟာဒေတာကွန်ရက်များနှင့်စနစ် backup လုပ်ထားမှတဆင့်အဆင်ပြေ Self-service ကိုပေးသည်; စနစ်ကဘဏ်ကဒ်ငွေပေးချေမှုနှင့် QR ကုဒ်ကိုငွေပေးချေခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှု, ငွေသားလက်ခံပြေစာ, အကြွေစေ့ပြောင်းလဲမှု, ပြေစာပုံနှိပ်, LCD ကိုထိတွေ့, IC / ID ကိုကဒ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖတ်ရှုရေးသားခြင်းရှိပါတယ်, နှင့်စစ်ဆင်ရေးပိုင်ရှင်မဲ့အသိဉာဏ်အားသွင်းသဘောပေါက်, ရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်အကြီးစားများအတွက် ယာဉ်ရပ်နားအများကြီးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များလည်းအလွန်ကြီးကားရပ်နားစာရေးများ၏လက်စွဲစီမံခန့်ခွဲမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်တိုးတက်အောင်စဉ် Self-ဝန်ဆောင်မှုပေးချေမှုစက်တွေများအသုံးပြုမှုအလွန်တင်ပို့ယာဉ်များ၏စီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
HD CCTV ကင်မရာပေးသွင်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး AnPR / LPR / ASPR ရပ်ကွက်စီမံခန့်ခွဲရေးကင်မရာစနစ်
Shenzhen Tigerwong Technology Co. , Ltd အကောင်းဆုံး Antp / LPR / Aspr / WPPRing Magazing CCENT MANDER SYSTERMANT CCTV ကင်မရာပေးသွင်းသူ,လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာ (လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုမှု, LPR) သည်ကွန်ပျူတာနည်းပညာ, ရုပ်ပုံပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာများနှင့်ယာဉ်မော်ဒယ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတည်ဆောက်ရန်, ။ ၎င်းသည်ပုံရိပ်တစ်ခု၏ပန်းကန်ပုံရိပ်ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးစုဆောင်းထားသောပုံရိပ်များသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်ထုတ်ရေးနည်းပညာ, ပုံစံနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးပြုသည်။ အသိအမှတ်ပြုမှုရလဒ်သည်စနစ်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေသည်။လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်1. ယာဉ်လိုင်စင်စာသားနှင့်ကိန်းဂဏန်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်2. လိုင်းတစ်ခုနှင့်လိုင်းနှစ်ခုလိုင်းလိုင်စင်နံပါတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်3. လိုင်စင် plate နံပါတ်အတွက် 0-22 အက္ခရာများနှင့်နံပါတ် 1 မှ4ကိုအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်4. လိုင်စင် plate နံပါတ်၏တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်5. ဒေတာဘေ့စ်သည် Capture Image, လိုင်စင်ပြားနံပါတ်နှင့်ယာဉ်နံပါတ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက်နှင့်မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။6. လိုင်စင် Plate နံပါတ်ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်မှတ်တမ်းသည် output ကိုသတင်းပို့နိုင်သည်7 ။8.IMESES အရွယ်အစား: 768 * 576pixels9. မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား - 16 * 16-48 * 64 pixels10.camera Gun level angle: drive ကိုလမ်းသွားသို့အများဆုံးထောင့် 25 ဒီဂရီ11.camera Gun ဒေါင်လိုက် Angle: အမြင့်ဆုံး angle 25 ဒီဂရီအလျားလိုက်သို့12.Minimum Brightness: 500lux
အကောင်းဆုံးထိုင်းပန်းကန်ပြားလိုင်စင်လိုင်စင်လိုင်စင်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ဆိုင်ရာလိုင်စင်ချရေးစနစ် / AntcctV Parking Community Access Control Barrier ကုမ္ပဏီ - Shenzhen Tigerwong Technology Co. , Ltd
Shenzhen Tigrerwong Technology Co. , Ltd အကောင်းဆုံးထိုင်းလိုင်စင်နံပါတ်လိုင်စင်နံပါတ်လိုင်စင်နံပါတ်လိုင်စင်စနစ်လက်တွေ့ထိန်းချုပ်မှုအတားအဆီး Comferier ကုမ္ပဏီ,လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာ (လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုမှု, LPR) သည်ကွန်ပျူတာနည်းပညာ, ရုပ်ပုံပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာများနှင့်ယာဉ်မော်ဒယ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတည်ဆောက်ရန်, ။ ၎င်းသည်ပုံရိပ်တစ်ခု၏ပန်းကန်ပုံရိပ်ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးစုဆောင်းထားသောပုံရိပ်များသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်ထုတ်ရေးနည်းပညာ, ပုံစံနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးပြုသည်။ အသိအမှတ်ပြုမှုရလဒ်သည်စနစ်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေသည်။
Intelligenal Anply လိုင်စင်လိုင်လိုင်လိုင်လိုင်လိုင်လိုင်လိုင်လိုင်လိုင်လိုင်စင်အမှတ်အသားများကိုအသိအမှတ်ပြုကင်မရာကားရပ်နားလမ်းလိုင်စင်စနစ်လိုင်စင်ပုံစံ
လိုင်စင် Plate အသိအမှတ်ပြုနည်းပညာ (လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုခြင်း, LPR) သည်ကွန်ပျူတာနည်းပညာ, ရုပ်ပုံပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာများနှင့်ယာဉ်မော်ဒယ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ယာဉ်မော်ဒယ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ယာဉ်မော်ဒယ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတည်ဆောက်ရန်, ။ ၎င်းသည်ပုံရိပ်တစ်ခုမှပန်းကန်ပုံရိပ်ကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်, ၎င်းသည်အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်ထုတ်ယူခြင်းနည်းပညာ, ပုံစံများကိုစုဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ထုတ်လွှင့်သောထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးပြုသည်။ အသိအမှတ်ပြုမှုရလဒ်သည်စနစ်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေသည်။
Shenzhen Tigerwong Technology Co. , Ltd နှင့်အတူယာဉ်ရပ်နားထုတ်လုပ်ရေးအတွက်မြန်နှုန်းလိုင်စင်လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုမှု
Shenzhen Tigerwong Technology Co. , Ltd သည်ယာဉ်ရပ်နားရန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်မြန်နှုန်းလိုင်စင်လိုင်စင်ချထားရန် Ltd သည် Profession Periorwong Technology Co. , Ltd တို့တွင် Professional Formation Construction နှင့်ထုတ်ကုန်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ထုတ်ကုန်ကုန်ကျစရိတ်များ၌ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည် ဖောက်သည်၏။လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာ (လိုင်စင် plate အသိအမှတ်ပြုမှု, LPR) သည်ကွန်ပျူတာနည်းပညာ, ရုပ်ပုံပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာများနှင့်ယာဉ်မော်ဒယ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတည်ဆောက်ရန်, ။ ၎င်းသည်ပုံရိပ်တစ်ခု၏ပန်းကန်ပုံရိပ်ကိုအလိုအလျောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးစုဆောင်းထားသောပုံရိပ်များသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်ထုတ်ရေးနည်းပညာ, ပုံစံနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးပြုသည်။ အသိအမှတ်ပြုမှုရလဒ်သည်စနစ်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေသည်။
CCTV စနစ်အတွက်လက္ကား TGW Plpring IP ကင်မရာနှင့်လိုင်စင် Plate Capture Plate Plate Plate Carking Plate Software
LPR / AnPR CCTS လိုင်စင်လိုင်စင်လိုင်စင် Plate Lina Plate Plate Plate Camera Factory Place